Dhambaal codshaso iyo Cabmaareyn isgugu jira oo ay Jaaliyada Awdal iyo Salal ee Sweden u dirayaan xukumada Somaliland « SAWNEWS NETWORK
« Tacsi iyo baroordiiq ka socota in ka badan 100 qof oo ka tirsan Jaaliyada Awdal iyo Selel ee Magaalada Qaahira
Gudomiyaha Kulmiye Ahmed Siilaanyo, Ayaa markii ugu horeysay tan iyo intii dhaawucu soo gaadhay qirtey in uu dhaawac culusi soo gaadhay, oo uu Dhakhtar Dibadeed U Baxayo. »
Dhambaal codshaso iyo Cabmaareyn isgugu jira oo ay Jaaliyada Awdal iyo Salal ee Sweden u dirayaan xukumada Somaliland
War saxafadeed Ku Socota 16kii Juyi, 2009
KU: MADAXWEYNAHA .JAM.SOMAALILAND, MR RIYAALE, HAR
KU: GUDOOMIYAHA MAXKAMADA SARE, HAR
OG: GUDOOMIYAHA GOLAHA GUURTIDA , HAR
OG: GUDOOMIYAHA GOLAHA BAARLAMAANKA, HAR
OG: GUDOOMIYAYAASHA 3da XISBI EE JAM. SOMAALI-LAND, HAR
Ujeedo: Tacsi, Canbaareyn iyo codsasho
Jaaliyadda gobolada Awdal iyo Salal ee ku nool dalka Sweden waxey si aada u canbaareynayaan falkii waxashnimada ahaa ee lagu gawracey marxuum Cali Bagaashle, marxuum Daa’uud Xaashi, marxuum Mawliid iyo marxuum Cali Aw Cumar, marinka u dhexeeya Gabiley iyo Dila iyo dadkii kale ee la afduutey iyo gawaadhidii iyo xoolihii saarna ee la qaatey. Waxan iyana canbaareyneynaa dadka qabiil ahaan u difacaya gacan ku dhiiglayaasha oo ka hor jooga in sharciga la horkeeno. Waxan iyana si aad u adeg u dhaleeceyneynaa ninkii booliska ahaa ee sida badheedhka ah u toogtey marxuum Cabdifataax Maxamed Qamaan oo jirey lix iyo toban sanno wax danbiya uu ku muteystey toogashana ayna jirin haba yaraatee.
Jaaliyadda gobolada Awdal iyo Salal ee ku nool dalka Sweden waxey tacsi tiiraanyanleh u dirayaan dhamman qoysaskii afarta marxuum ee kor ku xusan iyo wiilkii dhalinyarta ahaa ee booliska Somaliland ku toogteen magalaada Borama.
Waxan leenahey waa nasiib darro aad u weyn in arintan aadka u foosha xun ka dhacdo maanta Somaliland oo loo heysatey meel dadku nabad kuwada noolyihiin, kana jirto sharci iyo kala danbeyn.
Su’aasha ilaa imika la isweydiinayo waxey tahey: Maxey xukuumada somaliland ka qabatey arintan foosha xun?
Jawaabtii dawladda somaliland ka bixisey waxey aheyd in dadkii baroordiiqa ku jirey ee magaalada Borama loo diro ilaa labo boqol oo askari, ilaa imikana ciidanka milatariga somaliland ku gaaf wareegayo magaalda Borama. Booliska Somaliland waxey si arxan darroleh oo badheedha rasaas ugu fureen dad mudaharaadayey kuna toogteen wiil yar oo lix iyo toban sanno jirey.
Waxa la yaab leh in gacan ku dhiiglayaashii dadkan laayey ay wali guryahooda joogaan.
Su’aashu waxey tahey ciidamada Borama la dulgeeyey maxaa loogu diri waayey iney soo qabtaan gacan ku dhiiglayaashan?
Dadka reer Awdal iyo Salal way ka warqabaan dadaalka odayasha iyo waxgaradka reer somaliland ay wadaan iyo tacsiyadihii isdaba jooga ahaa ey soo gaadhsiyeen dadka reer Awdal iyo Salal, weyna ku mahadsanyihiin.
Dadka reer Awdal iyo Salal waa dad lagu yaqaano nabadd jaceyl, nafta qofka baniaadimiguna la weyntahey. Kollaba kama suurta gasho iney gawracaan dad masaakiina oon danbi galabsan. Sidaa awgeed, Jaaliyadda reer Awadal iyo Salal ee ku nool dalka Sweden waxey codsanayaan:
Si loo badbaadiyo dhiilo kale iyo dagaalo qabiil oo dhaca;
Si loo badbaadiyo dad kale oon waxba galabsan oo dhinta;
Si loo dabaqabto arinta oo loo joojiyo colaad dheer oyna ciddina ku liibaani doonin;
Si loo badbaadiyo magaca iyo nabadda ay ku faaneyso somaliland;
waa in si degdega loo fuliyo qodobadan hoos ku xusan:
1. In dadka reer Borama laga dulqaado ciidamada la dulkeeney, cabadudhaadana laga daayo, loona ogolaado iney u baroor diiqaan wiilashoodii la qawracey;
2. In dawladda Somaliland muujiso sidey uga xuntahey arintan, tacsina gaadhsiiyo qoysaskii dadkan la laayey;
3. In sida ugu dhaqsaha badan lagu soo qabto, maxkamad caadilana lagu saaro raggii dilalkan geystey iyo kuwii soo abaabuleyba;
4. In ninkii booliska ahaa ee toogtey Marxuum Cabdifataax Maxamed Qamaan oo lix iyo toban jir ahaa shaqada laga fadhiisiyo, maxkamdna lasoo taago, dawladuna magdhaw siiso waalidkii wiilkan laga diley.
Waxan ka digeynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta arintan, haddii codsigan siduu yahey loo fulin waayo, la iskana dhego tiro.
Jaaliyadda reer Awdal iyo Salal ee dalka
Secretery of Awdal and Salal Community
This entry was posted on July 17, 2009 at 10:14 am	and is filed under Articals. Tagged: Articals, Somaliland. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.